Assgbasa Ikea Lottorp ma ọ bụ Klockis na-ekiri - Ikkaro
Inicio >> Igwe eletriki na igwe na-emegharị ite >> Ighapu Ikea Lottorp ma ọ bụ Klockis na-ekiri
€ 5? N'agbanyeghị ego dị ọnụ ala? Na Amazon na-ere ha maka € 13 gịnị bụ ara, na ụlọ ahịa ị nwere ya maka € 5
Gbawara ele ma ọ bụ otú disassemble elekere
M guzo n'ihu elekere na-eche na ọ ga-abụ ọrụ dị mfe. Mana odi ka ndi Ikea achoghi ka anyi hu ihe di n’igwe. Enweghị ịghasa, ọ bụghị taabụ, ọ bụghị ịdọwa ahụ ya niile bụ otu. M na-ele anya na-ele anya naanị ihu na-anọgide. Yabụ na mgbu niile dị m n’obi m na-aga ebe ahụ, ọ dị mkpa ime ya otu a?
M na-aga ịhapụ gị a video na gbawara echiche, ma m nwere nsogbu edezi ya. Ọ bụrụ na m nweta ya, m ga-agbakwunye ya. Nke bụ eziokwu bụ na ọ dighi ọcha :-( M agbajisi mpe na-enweghị isi, na-eche na m nwere nrụgide site na ịkwụsị ịkwụsị iche ma ọ bụrụ na e nwere ụzọ ọzọ. Maka ịkwụsị vidiyo ahụ na ịdekọ ya n'otu oge. ezigbo onye ndụmọdụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ebukọta ya nke ọma soro usoro ndị a:
ị ga-ebuli n'ihu na a sikruuokwomoto atụ, naanị plastic na o yiri echebe.
You ga-ahụ ihe mmado nke na-ekpuchi etiti ahụ dum, ya na onye na-atụgharị ya na-aga na-ele anya, ebe enwere oghere ma gbapuo ya, enwere kposara na ịkwesighi ịmanye ihe ọ bụla
Na foto na-esonụ, lee anya na mpempe abụọ dị n'aka ekpe, ha bụ isi ihe iji wepu ya nke ọma.
Ozugbo ị hụrụ otu esi agbasasị ya. Ana m ahapụ ụfọdụ nkọwa nke elekere mkpu n'ime. Ihe niile di mfe ma anaghi m ahu otutu ihe bara uru. Ma obere igbe ahụ na-acha ọcha nke na-eme mkpọtụ bụ ọla dị na okpueze.
M emepee ya ka m hụ ihe kpatara ọ na-eme mkpọtụ, lee. A n'ibu ihe mmetụta. Anyị amatalarị otu esi ejikwa ọnọdụ elekere iji gosi otu ọnọdụ ma ọ bụ ọzọ. Na onyonyo ọ bụ kehoraizin, ma n'ezie nke a, elekere mkpu na-aga vetikal, nke mere na nchara bọlbụ mgbe niile emetụ a ụzọ ọnụ. Ọ dị m ka ọ bụ ụzọ dị omimi na anyị nwere ike ịme ọtụtụ ọrụ.
Oge ọ bụla elekere gbanwere, ọnọdụ na agba nke ihuenyo ahụ na-agbanwe. Nke a na-eme ya ọkụ na RGB ada
Otu ihe oyiyi otú ị pụrụ ịhụ na akụkụ nke ọzọ nke osisi na obere e nwere na-uru nke circuit.
Mbanye mkpọtụ ma ọ bụ otu esi eme ka ọ kwụsị mkpọtụ na ntụgharị
Na ngwụcha nke Lottorp amalitere m ịchọ ihe ndị mmadụ mere. Enweghị ọtụtụ ozi, ọ bụghị ịsị, amaokwu 2 ma ọ bụ 3 naanị, ee mbanye anataghị ikike ma ọ bụ mgbanwe nke nwere ike ịba uru. Maka na ọ bụrụ na onwere ihe na-akpasu iwe na elekere a, ọ bụ na oge ọbụla ị gbanwere ya na-ada ụda. Were ya na ọ bụ n'isi ụtụtụ ị nwere ọnọdụ okpomọkụ ma ịchọrọ ịhụ oge ahụ n'ihi na mgbe ị gbanyere ya ọkụ na-agbanye ya na beeeep. Ọ bụ ihe na-akpasu iwe ma ị nwere ike ịkpọte ndị gị na ha bi. Nke a ka ha meworo
Ozugbo m mere ya na elekere nke anyị na-ejikarị, aga m agwa gị otu o siri gaa.
Categories Igwe eletriki na igwe na-emegharị ite Igodo bọtịnụ
6 kwuru na "assgbasa Ikea Lottorp ma ọ bụ elekere Klockis"
Jenụwarị 2, 2018 na 10:05 pm
Adịghị m onye ọrụ aka (naanị nnukwu aka), mana m ga-asị na agbaghara m post gị, yana enwere m ezigbo oge ịgụ ha .. Enwere m olileanya na ị ga-agba ọsọ na 2018 .. :)
Jenụwarị 2, 2018 na 10:17 pm
Ana m ekele gị nke ukwuu maka nkwado gị. Ha na-ekele ibe ha mgbe niile, n'ezie :) Ka anyị hụ otu 2018 si eme, yana ọrụ na ezinụlọ ọ na-esiri ike ijide ọnụego mbipụta.
Jenụwarị 11, 2018 na 11:54 am
Ihe m ga-achọ ịma bụ na njikọta (uC) dị n'okpuru ojii ụwa nke efere ahụ ...
Jenụwarị 11, 2018 na 12:55 pm
Echeghị m na m nwere ike inyere gị aka :-(
Eprel 20, 2020 na 6:54 pm
Ọ bara ezigbo uru! Daalụ! Achọrọ m ịkwatu elekere a ma gbochie m ibibi ya
Eprel 22, 2020 na 8:25 pm
Ọ bụrụ n’ịchọpụta ihe ọ bụla nwere ike ịba uru, egbula oge ime ka anyị mara.